श्राद्ध गरे फलिफाप, नगरे यस्तो गति
२०७७ भदौ २९ सोमबार, महाभारतको एक श्लोकमा भनिएको छ पुत्र आफ्नो पूर्खाहरुलाई अर्थात पूर्वजहरुलाई ‘पुत्’ नामक नर्कबाट रक्षण गर्दछन् । त्यसैले उनलाई स्वयं ब्रह्मदेवले ‘पुत्र’ भनेका छन्। यस प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मपुराण इत्यादिमा श्राद्धविधिका महत्त्व स्पष्ट गर्ने अनेक श्लोकहरु छन् । ... बाँकी अंश»
जस्ले नियुक्त गर्‍यो उसैको सेवामै बित्यो अख्तियार प्रमुख घिमिरेको कार्यकाल
२०७७ भदौ २९ सोमबार, यती समुहको स्वार्थलाई संरक्षण गर्ने, वाइडवडी काण्ड, न्यारोबडी काण्ड लगायतको प्रकरणलाई उनले टुंगोमा पुर्‍याएनन । जबकि, यी विषय सार्वजनिक चासोको विषय हुन् । गोकुल बाँस्कोटाको कमिसन प्रकरणको टेप काण्डलाई पनि उनले टुंग्याउने चासो लिएनन् । दवाव नपरेको भए त उनले टेप प्रकरणलाई पनि तामेलीमा राख्ने प्रपञ्च गरेका थिए । आफूले मानेको पार्टीको नेताहरुलाई अख्तियारबाट सफाइ दिन लगाउने र उनीहरुलाई सकेसम्म नछुने उनको व्यवहार उनको कार्यकालमा देखिइरह्यो । ... बाँकी अंश»
बालअधिकार र केही सन्दर्भ
२०७७ भदौ २९ सोमबार, राज्य संविधान र कानुन लागू गराउने संस्था हो, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरि बालबालिकाको कार्यको लागि केही गर्छु भनेको संस्था केही जटिल अवस्था आउँदैमा पछि हिंड्न् मिल्दैन । महामारीको अवस्थामा कोरोनाको अत्यधिकता भएको स्थान र जोखिम कम भएको स्थानको वर्गीकरण गरि क्रमश शिक्षाको पहुँचमा बालबालिकालाई पुर्याउन र अभिभावकलाई सहजरूपमा आय आर्जन गर्ने अबस्था सृजना गरिदिनु पर्छ। ... बाँकी अंश»
सोमबार दुई पटक अमृतबेला, यस्तो हुनेछ समग्रमा दिन
२०७७ भदौ २९ सोमबार, आज तिष्य नक्षत्र, विष्कुम्भादि योगमा परिध, करणमा कौलव, आनन्दादि योगमा धाता रहनेछ । सूर्य सिंह राशिमा, चन्द्रमा कर्कट राशिमा रहनेछ । आज दिनमान ३० घटि ४७ पलाको रहनेछ । ... बाँकी अंश»
कोरोनाविरुद्ध खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले जोखिम भत्ता हैन राम्रो बोलिबचन पनि पाएनन्
२०७७ भदौ २८ आइतबार, स्वास्थ्यकर्मीहरु संक्रमित भए पछि उनीहरुको ठाउँमा काम गर्ने गरी बैकल्पिक स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तयारी अवस्थामा राख्नु पर्‍थ्यो, त्यो पनि भएन । स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल बढाउन सरकारले कुनै काम गरेन । सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोखिम भत्ता दिने भनेको थियो, तर कसैलाई पनि जोखिम भत्ता दिएन । जो फिल्डमा जानुभएन, उहाँहरुले भने जोखिम भत्ता पाउनुभयो । ... बाँकी अंश»
अधेरी रात्रीमा मानिसले कसरी गर्छ काम, याज्ञवल्क्यले बुझाए रहस्य
२०७७ भदौ २८ आइतबार, काठमाडौं । एक पटक राजा जनकले महर्षि याज्ञवल्क्यसँग सोधे, 'महाराज मनुष्य दिनमा जब आफ्नो दिनचर्याको कार्यहरु गर्छ तब कसको प्रकाशबाट प्रकाशित भएर कार्य गर्छ ?' याज्ञवल्क्य ऋषि जवाफ दिन्छन्,' राजन् उनिहरु सूर्यको प्रकाशबाट प्रकाशित भएर कार्य गर्छन् ।' ... बाँकी अंश»
कोभिड र कोमामा पुगेको कृषि
२०७७ भदौ २८ आइतबार, पहिलोपल्ट २०७६ पौष १५ गते चीनको वुहानमा पहिचान भएको कोरोना भाईरस त्यसयता विश्वब्यापी रुपमा महामारी बनेर संसारभर तिब्र गतिमा फैलिरहेको छ। नेपालमा २०७६ माघ १० गते पहिलोपल्ट कोरोना संक्रमण पुष्टी भएबाट आजका मितिसम्म ३३६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ५३ हजार १२० जना संक्रमित भएका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७७ भदौ २८ आइतबार, हिमालय क्षेत्रमा पर्यावरणीय अनुसन्धान गर्दै आएको अन्तरसरकारी संस्था इसिमोडका प्रमुख अर्थशास्त्री डा मणी नेपालले मुलुकको ऊर्जा उपयोग प्रबृत्ती बदल्नुपर्ने बताएका छन् । उनले विश्वब्यापी ऊर्जा खपतको प्रबृत्तीसँग नेपालको तालमेल नभएको बताए । अत्यधिक प्रदुषण गर्ने र तीव्र वन फँडानीमा सघाउने बायोमास (दाउरालगायत) को उपयोग नेपालमा अत्यधिक भएको उनले बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आइतवार आयोजना गरेको ‘हरित अर्थतन्त्र’ सम्बन्धि भर्चुअल अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् । ... बाँकी अंश»
बामदेवको सांसद हुने यात्राको नालीबेली, प्रधानमन्त्री हुने सपनादेखि सांसद हुने चाहना !
२०७७ भदौ २८ आइतबार, नेपालको राजनीतिक बृत्तमा पद, पैसा र आफना लागि हुनेनहुने मनलाग्दी नै गर्ने भनी प्रतिकनै बनेका पात्र हुन नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम । तत्कालीन एमालेले सार्वजनिक रुपबाटनै गरको घोषणालाई आधार मान्ने हो भने उनी यो देशका एक नम्वरका भ्रष्टाचारी हुन् । त्यो एमाले समेत गाभिएर बनेको अहिलेको नेकपामा उनी दुई अध्यक्षका एक उपाध्यक्ष हुन् । ... बाँकी अंश»
आइतबार पितृपक्षको एकादशी तिथि, यस्तो हुनेछ समग्रमा दिन
२०७७ भदौ २८ आइतबार, सूर्य सिंह राशिमा, चन्द्रमा बिहान ७ बजेपछि कर्कट राशिमा रहनेछ । आज दिनमान ३० घटि ४३ पलाको रहनेछ । ... बाँकी अंश»
जनमतको कदर गर्न नसक्नेबाट के आशा गर्ने ?
२०७७ भदौ २७ शनिबार, नेताहरुको सत्ता मोहले नेपालको राजनीति कहिल्यै चोखो रहन सकेन l गरिब जनताको करबाट उठेको अर्बौ रुपैया खर्च गरेर गरिएको चुनाबको नतिजालाई बेवास्ता गर्दै जसरी भएपनि सत्ता प्राप्त गर्नैपर्ने मानसिकताले नेताहरुको छबी जनतामा कहिल्यै सकारात्मक हुन् सकेन l ... बाँकी अंश»
सर्बहाराको सरकारलाई गिज्याईरहेको यी दृश्यहरु
२०७७ भदौ २७ शनिबार, देशमा झापा आन्दोलनदेखी जनआन्दोलनसम्म गरिब सर्बहाराको नाममा महान आन्दोलन गरेका गौरबमय इतिहास बोकेको पार्टीको दुई तिहाईको सरकार छ । प्रधानमन्त्री तथा सत्तासिन पार्टीका एक अध्यक्ष त्यस्तो हुनुहुन्छ जसले आफ्ना सबै सम्पत्तीहरु आफ्नो सेखपछि हुने गरि दान गर्नुभएको छ । अर्का अध्यक्ष आफ्नो भए जती सबै सम्पत्ती पार्टीलाई दिएर सशस्त्र जनआन्दोलनको कमाण्ड गरेका नेता हुनुहुन्छ । ... बाँकी अंश»
संसद सेरेमोनियल बनेपछि कानुन बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
२०७७ भदौ २७ शनिबार, धेरै जनामा हिजोको एउटा समाचारले आशा तथा सकारात्मकता सञ्चार गर्यो । तर कानूनको विद्यार्थी भएको नाताले सोही समाचारले मलाई भने सोचमग्न बनायो । समाचार थियो एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न नयाँ कानून बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन । मुलुकी अपराध संहिताको दफा १९३ ले तेजाब प्रयोग गरी कसैको अंगमा प्रहार गरेको कार्यलाई अपराधिकरण गरेकै छ । तैपनि महिलाको सौन्दर्यमाथि निशाना गरेर कुनै रिसईवी साँध्नको लागि ज्यानैसमेत जान सक्ने गरी हुने आक्रमणलाई निषेध गर्ने गरी अझै कडा कानून बनाइनुपर्छ भन्नेमा मेरो पनि समर्थन छ । तर मेरो चिन्ताको विषय चाहिं कानून बनाउनको लागि प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन आउनैपर्ने हो ? भन्नेमा हो । ... बाँकी अंश»
शनिबार बिहान ९ देखि साढे १० बजेसम्म राहुकाल, यस्तो छ समग्रमा दिन
२०७७ भदौ २७ शनिबार, आज आद्रा नक्षत्र, विष्कुम्भादि योगमा व्यतिपात, करणमा वणिज, आनन्दादि योगमा मुद्गर रहनेछ । सूर्य सिंह राशिमा, चन्द्रमा मिथुन राशिमा रहनेछ । ... बाँकी अंश»
विश्वामित्रले वशिष्ठका सय छोराको हत्या गर्नु पछाडिको एक कारण
२०७७ भदौ २६ शुक्रबार, काठमाडौं । विश्वामित्रलाई मानिसहरु राजर्षी भन्थे। उनले ठूलो तपस्या गरेर अणिमा, लघिमा, गरिमा आदि अनेकौ सिद्धी प्राप्त गरेका थिए । तरपनि उनलाई सबैले राजर्षी भन्थे। उनले एक दिन विद्वत मण्डलीलाई सोधे,'मैले यति धेरै तपस्या गरे, कति धेरै अमोध वरदानलाई प्राप्त गरे, फेरी पनि तिमिहरु मलाई राजर्षी भन्छौ ब्रम्हर्षी किन भन्दैनौ ?' सबैले भने,'ऋषिवर ! यदि वशिष्ठ महाराजले तपाईलाई ब्रम्हर्षी भन्नुभए हामी सबै तपाईलाई ब्रम्हर्षीको रुपमा स्विकार गर्नेछौ।' ... बाँकी अंश»
२०७७ भदौ २६ शुक्रबार, केही वर्षयता गाउँ तथा शहरका चिया चौतारीमा संघीयता नेपालले धान्दैन भन्ने चर्चाको बिषय बनिरहदा, अर्कोतिर देश डुबोस या संघीयता असफल होस् तर म र मेरो गुट कदापि हार्नु हुन्न, आफूमात्र राष्ट्रबादी रहेको कोरियोग्राफीकल जिनगोईजम जस्ता मानसिकता र घिनलाग्दो परिदृश्यले आम नागरिकलाई यो देशको सरकार र मूलधारको राजनीतिक दलको नेतृत्वप्रति व्यापक वितृष्णा पैदा गरेको छ । ... बाँकी अंश»
स्त्रीको नेतृत्वमा वायव्य र ईशानको यात्रा गर्दा राम्रो
२०७७ भदौ २६ शुक्रबार, सौरमान अनुसार आज शुद्धआश्विनकृष्ण (पितृ) को नवमी तिथि रहनेछ । आज मृगशिरा नक्षत्र, विष्कुम्भादि योगमा सिद्धि, करणमा तैतिल, आनन्दादि योगमा मानस रहनेछ । ... बाँकी अंश»
कोरोना नियन्त्रण गर्न सर्वसाधारणको जिम्मेवारी
२०७७ भदौ २५ बिहिबार, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको त्रासले समाज नै आतंकित छ । नेपालमात्र होइन धेरैजसो विकसित देशहरु पनि यो महामारीबाट उम्कन सकेका छैनन् । नेपालमा पनि कोरोनाको त्रास छाएको ६ महिना भइसकेको छ । तत्काल खोप ननिस्केकाले यसको प्रकोप कहिलेसम्म हुने हो भनेर यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । ... बाँकी अंश»
बिहीबार सोह्रश्राद्धको अष्टमी तिथि, पञ्चांगअनुसार यस्तो हुनेछ समग्रमा दिन
२०७७ भदौ २५ बिहिबार, आज रोहिणी नक्षत्र, विष्कुम्भादि योगमा वरियान, करणमा बालब, आनन्दादि योगमा उत्पात रहनेछ । सूर्य सिंह राशिमा, चन्द्रमा वृष राशिमा रहनेछ । आज दिनमान ३१ घटि ३ पलाको रहनेछ । ... बाँकी अंश»
२०७७ भदौ २४ बुधबार, सिडियो र प्रवक्ताको पछाडी लुकेर बसेको राजनीतिक नेतृत्व दुलोबाट निस्केर नागरिकसंग संवाद गर्ने हिम्मत गरोस् । अनेकन समस्याका बावजुद सिडियोको आदेश मानेर आम नागरिक घर भित्र बसिरहँदा, सरकार के गर्दै थियो त्यो बताओस् । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के के तयारी भयो ? संक्रमितको संख्या थपिँदा उपचार गर्न सक्ने क्षमता कति बढ्यो? काम नै नगरिरहेको रेस्पोन्स सिष्टमलाई कहाँ कहाँ बदलियो ? के-के गर्दै जाने योजना छ ? लकडाउन/निषेधाज्ञा कसरी उपयोग गर्ने सोचेको, वा लकडाउन गरिरहने सोच हो ? ... बाँकी अंश»